RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo laabashada ahayd oo ay kooxda Man City ka gaartay Burnley – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo laabashada ahayd oo ay kooxda Man City ka gaartay Burnley
(Burnley) 26 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay naadiga Burnley oo marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay uga adkaatay 2-1.
Man City ayaa goolka looga horreeyey, laakiin labo gool oo uu dhaliyey weeraryahankeeda Sergio Aguero ayey guul ku gaareen.
>- Manchester City ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay labo jeer 16-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Man City ayaa guul gaartay lix ka mid ah todobadii kulan ee ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda xilli ciyaareedkan, waxaana ay ku soo dhaliyey 17 gool.
>- Bandhiggii cajiibka ahaa ee uu sameeyey kulankan uu ka horjeeda Burnley, Sergio Aguero ayaa loo diiwaan geliyey inuu gool ka dhaliyey 29 ka mid ah 30 kooxood oo uu ku wajahay ama kaga hortagay horyaalka Premier League.
>- Sergio Aguero ayaa 27 jeer shabaqa soo taabtay horyaalka Premier League inta lagu guda jiro sanadkan 2016, waxaana uu siddeed ka badan yahay ciyaaryahan kasta oo kale.
>- Weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero ayaa 33 gool dhaliyey 34-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu Premier League u ciyaaray kooxdiisa Manchester City.
>- Dean Marney ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Premier League 2,558 (labo kun shan boqol konton iyo siddeed) maalmood kaddib, tan iyo markii uu shabaqa soo taabtay kulan dhexmaray Hull iyo Everton bishii November sanadkii 2009-kii, markaasoo uu ka tirsanaa kooxda Hull.
Dekadda oo iska khasaarisay fursad ay hogaanka kula qaban kartay Banaadir
8 Dabaal deg Gooleed ee ugu qurxoon ciyaar gacmeedka FIFA 17